Tag: chinyorwa | Martech Zone
BunnyStudio: Tsvaga Nyanzvi Yezwi-Pamusoro Tarenda uye Ita Yako Audio Projekiti nekukurumidza uye Nyore
Muvhuro, July 26, 2021 Muvhuro, July 26, 2021 Douglas Karr
Handina chokwadi chekuti sei munhu achivhura maikorofoni yavo yelaptop voita basa rinotyisa kurondedzera vhidhiyo yehunyanzvi kana odhiyo track yebhizinesi ravo. Kuwedzera rezwi rezwi uye kurira kwembambo hakudhuri, yakapusa uye tarenda kunze uko inoshamisa. BunnyStudio Kunyange iwe uchinge waedzwa kuenda kunotsvaga kontrakta pane chero nhamba yemadhairekitori, BunnyStudio yakanangiswa yakanangana nemakambani anoda hunyanzvi rubatsiro rwekuteerera neayo maodhiyo kushambadzira, podcasting,
Sonix: Automated Transcript, Dudziro uye Subtitling mu40+ Mitauro
Chitatu, Ndira 6, 2021 Chitatu, Ndira 6, 2021 Douglas Karr
Mwedzi yakati wandei yapfuura, ini ndakagovana kuti ndakanga ndaita shanduro dzemuchina yezvangu zvemukati uye dzakaputika kusvika uye kukura kwenzvimbo. Semuparidzi, kukura kwevateereri vangu kwakakosha kuhutano hwesaiti yangu uye bhizinesi, saka ndinogara ndichitsvaga nzira nyowani dzekuwana vateereri vatsva… uye dudziro ndeimwe yacho. Munguva yakapfuura, ndakashandisa Sonix kupa zvinyorwa zve podcast yangu ... asi ivo vane
Ecommerce yanga iri tsika inokwira pamusoro pemakore gumi apfuura. Uye nedenda iri, vanhu vazhinji vari kutenga pamhepo kupfuura nakare kose. Ecommerce inopa yakakwana nzira yekusvika huwandu hwevanhu pasirese kubva kurudyi kuseri kwekombuta. Pazasi, isu tichatarisa kukosha kwekushambadzira masevhisi ekushandura uye mashandisiro aungaita kukwidziridza eCommerce yako yekutengesa. Nei Ichikosha Kuti Ushandise Nyanzvi Yekushambadzira Dudziro yeYako Yepasi Ekushambadzira Strategic Uchishandisa nyanzvi kushambadzira sevhisi sevhisi
16 Matanho ekumanikidza Zvemukati Zvekugadzira
China, July 17, 2014 Douglas Karr
Dzimwe nguva rondedzero inoita kuti hupenyu huve nyore uye ichi chakanakisa pane mazano ekuvandudza zvinomanikidza zvisikwa zvine mutsindo neWebhu Kutsvaga SEO. Ini ndinoda rairo pano nekuti inopfuura iyo chaiyo midhiya uye inonongedzera kune zvimwe zvinhu zvinoita kuti kudya zvirimo zvive nyore zvakare. Matanho gumi nematanhatu ekumanikidza Kugadzirwa Kwezvinhu: Funga semunyori wenhau. Wana kurudziro kubva kunetiweki yako. Edza zvipfupi, zvipfupi zvemukati. Shandisa indasitiri nhau. Zvichengete zvichitaurirana. Usadaro
Audio uye Vhidhiyo Chinyorwa Chakagadzirwa Nyore: Speechpad
China, January 31, 2013 Chitatu, Ndira 30, 2013 Douglas Karr
Patakanyora nezve Youtube optimization munguva yakapfuura, imwe yemakiyi yaive nerondedzero yakadzama. Youtube haina muchina kunyora uye kududzira iyo verbiage muvhidhiyo yako (zvakadaro), saka kuvimba neruzivo iwe ruzivo mune yako vhidhiyo tsananguro kuchiri kwakakosha. Jay Baer weConvince uye Shandura yakakurudzira Speechpad kwatiri. Vakanyora anopfuura 1,230,645 maminetsi eodhiyo nevhidhiyo yevatengi yakakura uye diki. Mashandisiro anoita Speechpad Gadzira account